Oromia Today | Misooma Oromiyaaf Lafaa fi Qabeenya Oromiyaa Bilisoomsu
← Liberating The Land and Resources for The Development of Oromiyaa
Oromo never desired others land passing over their own country →
Wanti karoorri misoomaa dhimma baasu gaafatu 1) qabeenyi sabaa jiruu bilisummaan sosso’uu dandahu 2) jaarmaa sabaa jabaa ummata wiirtuu tolfate 3) hoggansa jaallatamaa fi abbaawummaan itt dhagahamu 4) jijjiiramaa dhaabaa hundee 5) gocha waloo jechuun, qabeenya sabaa, oguma namaa dabalatee dhimma itt bahuuf, qooda fudhannaa fi wareegama sabboonotaa hunda qabeenya sabaa kan oguma namaa dabalatutt dhimma bahu.
Jaarraa 19faagara dhumaa kahee Oromoon lola wal irraa hin cinne hadhaawaa koloneeffatoo Habashaa lafa qabatanii, ummaticha hacuucuu, itt roorrisuu, saamuu fi hundee buqqisuuf abbalaa ture waliin gaggeessaa ture. Haa tahu malee koloneeffatoon Habashaa ifaajjee qabsoo bilisummaa saba Oromoo hawwii saa badaatt milkaawuu hin dandeenye ture. Saba Oromoo gutummaatt too’achu hin dandeenye, fedhi aadaa, seenaa fi sirna Gadaa demkratawaa saanii diiguunis milkaawuu hin qabu. Lolli of oolchuuf dhalootaa dhaloota ummata Oromoo bilisummaa, nagaa, wayyaa’ina hawaasomaa, fi ulfina saba saaniifii kutataniin itt fufee jira.
Qabeenyi madda jireenya namaa fi bu’uurri hawaasomaa fi waatattaa isaan irratt hundaawa. Yeroo sabi tokko yaa’a misoomaa eegaluu waa’ee qabenyaa barbaachisuunii irrat beekumsa misa diinagdee waara argachuu dandeessisu argachuu qaba. Sabootu hundi dureessa haa tahu hiyyeessa, egeree diinagee saanii fromsa roga diinagee addunyaa waliin raajachuun waan jiru. Haa tahu malee karoora misoomaa yayyabanii egerreef hojii irra olchuun qabeenya saba ofii jiru heduu gaafata. Hariiroon malbulchaa fi diinagdeen mootummaa bucuu Abisiiniyaa gidduu jiruu fi itt fufaa jiu Oromoo wayyaba tahe gidduu jiru kan cunqursaa fi cunqurfamaa gidduutii. Aka seenaan mullisutt hariiroon kun guddina hawaasoma Oromoo fi diinagdee qofa utuu hin tahin hidda hawaasomaa fi aadaafis gufuu taha. Jaarraa 19faaMinilikiin weeraramuu fi qabamuu Oromiyaatii eegalee hanga hardhaatt qabeenyi Oromoo halagaan too’atamaa, saamamamaa fi barbadaawaa, Hawaasi Oromoo bu’aa qabeenya saan uumaa fi humna saa irraa ittisamee ture. Aburii statistiks akka agarsiisutt 68% GNPn Itophiyaa hoomisha qonnaa fi qabeenya Oromiyaa biraa irraa argama. Gaaga’ammi fi wareegammi dargaggoon keenya hardha lafa saanii qabaa fi olhantummaa halagaa jalaa baasuuf kaffalaa jiran itt cichoomaa dhiicha gara of jiraachisuutt godhamuf raga dha.
Lafaa fi qabeenya bilisoomsuu fi eeguuf tarkaanfii jalqabaa
Demokraasii fi charterii hedhataan qabatattee TPLF karaaa mimiccira malbulchaa, hirree lolataa fi ajjeechaa. buqqisa, cagada fi tuutaan hidhuun akka hamaatt hacuucuu fi deegsuu murteeffatee jira. Jane Curtz akka hubatetti, “Bantiin Afriikaa, Itophiyaan”.Tigreen murnoota wayyaba keessaa isee xiqqishuu 8% dilormichaa taatii. Tigree fi Amaarri aadaa Seemummaa kan qooddatan aadaaa fi malbulcha Ethiopiyaaf danaa kennanii jiru.. Tigreen Kiristaanummaa Itophiyaa qulqullummaa saan qabatanii jiru.2 Abjuu kolonummaa kana bakkaan gahachuuf TPLF waa maluu qaba: Kallachummaa empayera Itophiyaatt of jijjiiruuf maqaa tahu ummachuu qaba, of yoo “Adda Demokraatawaa Ummata Itophiyaa (EPRDF) jedhee moggaasu waluma faana “dhaaba ummatootaa demokraatawan” jechuu kan sabota addadaa irra babahan boojuu waranaa TPLF fi EPLF harka turan irraa ijaarrate. Malli kun hojii jalqabaa TPLF Oromiyaa, the Amhara, Afar, Hadiya, Sidama, Walayta, Kambata, Konsso fi Ogaden haleeluu gargaareen ture. Akka birkii qormaataa US Itophiyaa jiruutt;A Country Study(1993): Yeroo EPRDF Dhaba demokratawaa Ummata Oromoo fi Dhaaba Demokraatawaa Sochii Qondaalota Itophiyaalamaanuu 1990 keessa TPLFiin uumaman” tarsiimessoon Tigree tokkummaan murnoota kana dhuma irratt TPLF akka hundee saa Tigrayi gamatt ballifatu gargaaru dandaha jedhanii abdatanii turan. Eegalooti mootummicha gargaaruun abdatame garuu EPRDF, TPLF huccuu Amaaraa jalaa malee waan biraa miti jedhanii balaaleffatan”.3
Caamsaa 1991 erga aangoo butee yeroo bitatee aangoo jabeeffachuun mootummaa TPLF uummachuu fi hidhata cehumsaa dhaabe. Duulli saanii gargaarsa dhaabota horoo fi mootummoota sagidduun doolara biliyoonaan lakkaawamannii jarjarsamaa dhufe.Jalqabumaa, TPLF kan dhaabame Gaanfa Afriikaa jeequu fi olaantmmaan gaggssuuf ture. Duris mootummoti saba bucuu Habashaa sochii bilisummaa Oromoo ukkaamsuuf anga’oota alaa irratt hirkachuun beekamaa ture. .Roguma sanaa irra bu’uun EPRDFis si’ana hagam mirga ilmo namaa irra haa eejjetu, ummatoota kibbaa irratt badiisas haa hojjetus mootummoota dhihaa irraa gargarsa guddaa argataa jira. Akkuma Mootummaan Cehumsaa Itophiyaa dhaabbateen Amerikaa fi Baakiin Addunyaa bulcha Mallas Zeenawiif gargaarsa hooriif irbuu seenaniif. Onkololessa 6.1992 Washington Post akka gabaasett, “ United States gabaa dorgommee misoomsuuf f $161 wagga sadii irra hiree, akkuma Baankiin Addunyaa $kumkuma 750 diinagdee jalqabsiisuuf godhe.”. Kanatt dabalee dhaaboti horoo Addunyaa akaa $biliyoonii 1.2 akka gargaarsa diingdeett EPRDF Mallas Zenawii kennuuf lalabanii jiru. Washington Post Onkololessa 6 1992 akka gabaasett,”Liqeessitooti Lixaa irbuu Mallas demokraasii fi gabaa bilisaa fudhachuun Sadaasa keessa $biliyoona 1.2 hirdhina bajetaa kan guutu liqeessuufii dhaaf walii galan. Aka hangameessa sabgidduutt hammi saa guddaa tahuu baatus diddaa dur gargaarsaaf jiru cabsuu bakka bu’aa taha jedhan qondaaloti Lixaa.5
Karoorri kolonummaan qabachuu kan Nugusa Leopold Beeljigii fi Ceci Rodessii Britania lafaa fi waatattaa dheedhii barbaacha jaarraa 19thkeessaa kan anga’oota Awuropaan hedduu barbaachisu argachuuf tolfameen wal fakkaataa. Akkum sanaa koloneeffattuun gurguddoo Tigray afeerraa mootummoota alaa fi digaluu qeeyee kanneen saamicha guddifachuu fi bu’aa saamicha olhaantummaan argame walii qooduu malee namummaa fi lubbuu fi nageenya ummata empayerichaaf dantaa hin qabne gochaa jiru. Akkuma aangoo qabateen, TPLF lafti baadiyyaa fi magaalaa kan finnaati jechuun akka fedhett dhimma itt bahuu dandahus hime. Imaammati wajawajaa kiraayii lafaa kennaa lafaagurgurtaa kubbaaniyaa, hayyama abbummaa fi mirgi albuuda baasuu kubbaniyyoota qeeyee fi sagidduu diinagdee kolonummaa, malbulcha fi tooftaan lolataa isa jaarraa 19faa walfakummaa qabuu.6
Imaammati qacceefixii dilormaa Oromoo humnaan lafa akaakilee saanii irraa kaasuu qaama yaa’a fixiisa kan qaama, diingadee, fi aadaan Oromiyaa keessaa namoota magaalaa fi baadiyyaa kukumoota hundee buqqisuudabalata. Waggoota 27 darbaniif lolota malbulcha, diingadee fi aadaa deggertoota kolonummaa saa di kalchoota keessaa tabalatee badii dandahame hunda Oromoo empayerittii keessa jiranitt raawatee jira. Jaarraa tokko oliif Habashaan bifa lafa Oromiyaa geeddaruuf Oromoo balleessuun geeddaree abbaa itt tahuun qubsiisaa fi ofiitt makuu miltolee saa kolonummaan deggeramee dhiibaa turee.. bara darban TPLF lafa dsaanii durdurii irraa Oromoo kukuma dirqiin kaasuun biyyichii dhuunfaa qubatootaa bakka lakkisee akka dhuunfaa qubattoota Habashaa tahu aggammatee ture. Hamilati Habashaa jaarraa 21th gocha qacceeffjixisaa fi lammii qulqulleessuu guddicha addunyaan argee hinbeeknett hedama.finfinnee fi naannaa seetii nammi kukuma lamaa ol tahan lafaa fi mana dhaloota darbe irraa dhalmaan itt darbe kaafamanii sanaan hawaasa qonnaan bulaa hedduutu sossosamee.
Maqaa Finfinnee guddifnaan Mater Planii duuba yaadi ture waan biraa utuu hin tahin danbalii duguggaa hedamee humnaan kaasuun ofii itt galanii magaalicha dhuunfachuu dha. Diree Dawaa, Gobba Baale, Shashamanne, Asoossa, Adamma fi magaalota guddataa jiran biraatt sagantaa qacceefiixii wal fakkaatu deemaa jira. Karoorri guddaan ummata buqqisuu kan yayyabame sernaan saba Oromoo dukkana jala dhoksanii finnaa ofii handhuura Oromiyaa keessatt ijaarrachuufii..Yakkamtooti kun roorroo hedduu, gola finnaa, ukkaamsa hamaa, fi qulqulleessa lammii Oromiyaa balloo fi saboota empayerittii biraa irratt raawatanii jiru.